simplybeposted.com – A Space
Good combination of Myanmar foods	လိုက်ဖက်တဲ့ ဗမာဟင်းတွဲများ
၁. ကြက်သားအာလူးဟင်း + ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော်…
၂. ငါးမွှေ+ ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ ငရုပ်ပွကြော် ++ ဘာလချောင်ကြော်
၃.ငါးဖယ်ငါးဆုတ် + ကျောက်ဖရုံသီးချဉ်ရည် +ရုံးပတီသီးကြော် + ငါးပိထောင်း
၄.ပုစွန် ဆီပြန်+ ကန်ဇွန်းရွက်ချဉ်ရည် +ပန်းဂေါ်ဖီကြက်ဥ +ငရုပ်သီးဆားထောင်း
၅. ဘဲဥဆီပြန် + ပဲရွက် ဟင်းချို+ ကင်းပုံသီးချက်+ ငံပျာရည်ချက် +တို့စရာ
၆. ပုစွန်ဘော့ချိတ်+ ဂေါ်ရခါးသီးအချိုချက် + မြင်းခွာရွက်သုတ် + ငါးပိချက်
၇.၀က်သနီချက် +ဘူးသီးချည်ရည် +ရွှေပဲသီးဥနီ+ ဘာလချောင်ကြော်
၈. ကကတစ် ကြက်ကသွန်နှပ်+ ဂေါ်ဖီရွက် ကြာဆံဟင်းခါး+ခရမ်းသီးသုတ် + ငါးခူငါးပိကောင်
၉. ငါးထမင်းဆိမ့် + ကြက်ကြော်+ ဘူးသီးဟင်းခါး
၁၀. ကြက်သားဆီပြန် + ပဲကြီးဆူးပုပ် + သရက်သီးပိုးတီသုပ် + ငံပျာရည်ကြော်
၁၁.ဝက်သားအာလူးဟင်း + ချဉ်ပေါင်ရွက်ဟင်းချို + သရပ်သီးသနပ် + ငါးပိကြော်
၁၂.ကြက်သားကာလသားချက် ဘူးသီးရော+ နံရိုး ကျောက်ဖရုံ ဟင်းချို +ပုစွန်ချဉ်သုပ် + ငါးရံ့ခြောက်ဖုတ်
၁၃.သီးစုံဒန့်ဒလွန်သီးပဲကုလားဟင်း + ငါးကျည်းအစပ်ကြော်+ ဘဲဥကြော်
၁၄. ကြက်သားဆီပြန်+ ချဉ်ပေါင်ကြော်+ဘူးသီးဟင်းခါး+ငပိရည်+တို့စရာ
၁၅. ငါးအိုးကပ် + ပဲကြီးနပ် + ငါးပိကျော်+ မုန်လာချဉ် သုပ်
၁၆. ကြက်သားကြော် + ဘူးသီးဟင်းခါး + ငါးချဉ်သုပ် + သီးရွက်စုံနှမ်းဆီဖြန်းအစိမ်းကျော်
၁၇. ငါးရံ့ကြော် +ဘူးသီးချည်ရည် +ပဲကြီးနှပ်
၁၈. ဝက်ပုန်းရည် +မန်ကျီးရွက်သုပ် +ကြာဇံဟင်းခါး
၁၉. ငါးခူအစပ်ကြော် +ပဲနီလေးဟင်းချို +ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်
၂၀. ငါးသလောက်ဟင်း +ကန်စွန်ရွက်ကြော် +ဘူးသီးဟင်းခါး
၂၁. ဆိတ်သားနှပ် +မြင်းခွာရွက်သုပ် +မုန်လာဥချည်ရည်
၂၃. ဝက်သားအချိုချက် + ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့မျှစ်အချဉ်ဟင်း + အာပြဲခြောက်အစပ်ကြော် + ပဲသီးဘဲဥကြော်
၂၄. ရွှေ ဖ ရုံ့ သီး ဆီ ပြန် ၊ မန် ကျီး စိမ်း ချက်+ုကြာ ဇံ ဟင်း ခါး+ ငါး သ လဲ ထိုး ကျော်
၂၇. ကြက်သားကြော်+ကန်စွန်းရွက်ကြော်+ငပိရည် တို့စရာ
မကျည်းသီးအမှည့်ကို ငါးပိဖုတ်နဲ့ ဖျော်ရည်စိမ်+ဆိတ်သားခြောက်ငရုတ်သီးအိုးကပ် or ငါးလေးအိုးကပ် + ပိန္နဲသီး နှပ်ိ
၃၂.ကြက်ဘူးသီး+ ငပိထောင်း + သရက်ချဉ်သုပ် + ပုဇွန်ခြောက်ကြော်
၃၃.ပဲနီလေး ပဲဟင်း+ ပန်ချာပီခြောက်+ ငရုတ်သီးခြောက်ကြော်+ကြက်သားအခ်ျုနှပ်+သရက်ချဉ်သုပ်
၃၄.မျှဉ်ချဉ်ကြက်ရိုးချဉ်ရည်+ ငါးပိထောင်း+ ဝက်သားလုံးကြော်
၃၅.ကြက်သားနဲ့ ရှမ်းချဉ်+ ငါးကျည်းခြောက်ငရုတ်သီးချက်+ဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းချို
၃၆. ပုဇွန် ငရုတ်ပွသီးနဲ့ ဥနီ အချိုချက်+ပဲကြီးဟင်းရည်+ပုန်းရည်ကြီးသုပ်
၃၇. ကြက်သားပြုတ်ကြော်+ ခရမ်းချဉ်သီး ငါး ငပိချက် စပ်စပ်+ တို့စရာ – ပေါက်ပန်းဖြူ.. ပဲသီး..ဖျော.. သခွားသီး..နဲ့ တမာချဉ်..+ ဘူးသီးဟင်းခါး…
၃၈. ငါးခူကြော် + ဆူးပန်းရွက် ချဉ်ရည်+ ကြက်ရိုးငရုတ်သီးချက်+မြူရွက်သုတ်
၃၉. ငါးကြော်ငရုတ်ခွဲကြမ်းကြော်နှပ် + ပဲကြီးဆူးပုတ်အရွက်စုံတောဟင်းချို +သရက်ချဉ်သုပ်
၄၀. ငါးပေါင်း သရက်သီးအစိမ်းသုပ် ပုဇွန်ခြောက်ငပိကြော် ဘူးသီးဟင်းခါး
၄၁.သီး စုံ ချဉ် ရေ+ဝက် သား လုံး မှိုချက် + ပဲ က တီ ပါ ပြုတ် ကျော်+အ ညာ ငြုပ် သီး ထောင်း။
၄၃. သီး စုံ ချဉ် ရေ+ဝက် သား လုံး မှိုချက် + ပဲ က တီ ပါ ပြုတ် ကျော်+အ ညာ ငြုပ် သီး ထောင်း။
၄၅.ခရမ်းချဉ်သီး ပန်ထွေဖျော် + ငါးရံ့ ခြောက် ဖုတ် + ပန်းမုန်လာ ကြော် + ပဲရာဇာနဲ့့ ကျောက်ဖရုံသီး ဟင်း ချို
၄၆. ပဲကုလားဟင်း+ အာပြဲခြောက်ကြော်စပ်စပ်+ အစိမ်းကြော်+ ငပိရည် တို့စရာ သရက်သီးကင်း
၄၇.ပုဇွန်လေးနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးအူဖေါက်ချက်+ ပန်းပွင့်နဲ့ကြက်ဥကြော် +ငရုပ်သီးထောင်း ငါးခြောက်ဖုတ်
၄၈.ဝက်သည်း ပဲကြာဇံမှိုခြောက်ဥနီကြော် တရုပ်နံနံအုပ် +ဝက်နံရိုး ကြံမဆိုင်အရည်သောက်+ ပဲပုတ်အစပ်ကြော်
၄၉.၀က်သားနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးဆီပြန်+ မျှစ်ထောင်းစပ်စပ် +ပဲနီလေးဟင်းချို
၅၀. ကြက်သားနဲ့ပျားရည်ချက်+ ငပိကြော် +ချဉ်ပေါင် ဟင်းချို +ငါးဖယ်ပြုတ်သုတ်
၅၁. ကြက်သားပေါင်း ကြံမဆိုင် နဲ့ဘဲသားချက်+ ငပိကြော် + သရက်သီးသုပ်
၅၂. ကြက်ကုလားပဲ + နာနတ်သီးသုတ် +ငံပြာရည်ကြော်ပန်းပွင့်ဘဲဥကြော်
၅၄.ကင်းမွန်ချဉ်စပ်+ဘူးသီးကြာဇံဟင်းခါး+မျှစ်ကင်းပုံသီးကြော်+မျှင်ငါးပိငါးမီးဖုတ်ဖျော်+သရက်သီးစိမ်း ရုံးပတီသီးခရမ်းသီးပြုတ် .ပေါက်ပန်းဖြူရွက်ပြုတ်
၅၅.ဘဲဥချဉ်ဟင်း ကန်စွန်းမှိုကြော် ငါးပိတို့စရာအစုံ ဘူးသီးဟင်းခါး
၅၇.ဘဲသားအာလူးဆီပြန် ဗူးညွန့်ဆူးပုတ်ဟင်းချို ငါးပိရည်တို့စရာ သရက်သီး
၅၉.ပိန်းဥနဲ့ကြက်သားအရည်သောက်ဟင်း ငါးခူကြော်နှပ် ..ငပိချဉ်စပ်ထောင်း
Ref – Evyskithen
Author stevePosted on 19th January 201619th January 2016Categories FoodsTags list of myanmar foods, myanmar curry, myanmar foodsLeaveacomment on Good combination of Myanmar foods	How to roastaduck	Roastingaduck is fairly easy. In fact easier than making shepherd pie. Only2things you need to buy: whole duck and duck seasoning powder. Frozen ducks are available in chinese super markets ,such as Wing Yip, Cee Woo, Loon Fung. In Wing Yip it is only £5.70 for whole duck. When you buy duck you can pick up duck seasoning mix which is Thai origin.
1. Defrost the duck by leavig in room temperature about 12 hours . If not done properly the outcome will not be great
2. Dry the skin with dry cloth or NEW kitchen cellulose sponge
3. Apply roast duck seasoning mix inside and outside thoroughly.
Thai Roast duck seasoning mix £0.55
4. Let duck skin dry by putting it in open space at room temperature for about 4-5 hours. You can use fan or hair dryer to save time.
5. Optionally you can inflate underneath the skin for better result.
6. Place the duck on the rail around the centre of oven. I usually set the temerature at 180-190 C in my electric fan oven. The formula is 40 min for 1 kilogram . So if your duck weighs 2.8kg , the cooking time is 112 min plus extra 20-30 min. You need to turn it every 30-40 minutes.
I use2trays. One is to collect oil coming down from duck. 2nd one is placed at the bottom of oven and I put some water to prevent duck skin very dry during cooking.
Of course..You also need these to chop.
Author stevePosted on 6th January 20166th January 2016Categories UncategorisedLeaveacomment on How to roastaduck	How to join UK university	ဗြိတိန်မှာ ကျောင်းတက်ချင်သူတွေ အတွက် ရေးပေးလိုက်တယ်
၁။ဘယ်လိုပညာသင်ချင်လဲ ဘယ်လိုင်းလိုက်ချင်လဲ ကိုယ့်ဘာသာ အရင် ဆုံးဖြတ်ရမယ် ကျောင်းတွေက စီးပွါးရေး ကနေ အနုပညာ ဗိသုကာ ဓတ်ပုံထိ အကုန်ရှိတယ်။
၂။ IELTS က အနဲဆုံး 5.5 လိုတယ်။ တချို့ကျောင်းတွေက 6.5 အထက်တောင်းတယ်။ IELTSက ကျောင်းဝင်ခွင့်တင်မကဘဲ ကျောင်းတက်ရင်ပါအသုံးလိုတဲ့ အတွက် ဖိဖိစီးစီး လေ့ကျင့်ဖို့လိုမယ်။
၃။ ကျောင်းလျှောက်ရင် ယူကေ က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ကျောင်း လျှောက်မှ ဗီဇာ ရနိုင်မယ် ။ ဒီမှာ ကြည့်လို့ ရတယ်။ University list
၄။ ယူကေမှာနေရင် နေစာရိတ် စားစာရိတ် အကုန်ခံနိုင်ကြောင်း ဘဏ်စာရင်းပြဖို့လို့တယ်။ တနှစ် သင်တန်းဆို တနှစ်လုံးစာ ငွေရှိကြောင်း ဘဏ်ထဲမှာ တလ အနဲဆုံး ပြရတယ် ( ပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ် ကတော့ ကျပ် သိန်း ၁၅၀ ) သူတို့ လိုချင်တာက လန်ဒန်မှာ ကျောင်းတက်ရင် တလ ပေါင် ၁၀၂၀ လန်ဒန် အပြင်ဆိုရင် တလ ၈၂၀ အကုန်ခံနိုင်ရမယ် ၅။ ဆေးစစ်ဖို့လိုတယ်။ ဗြိတိသျှ သံရုံးက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဆေးခန်းရှိတယ်။ သူတို့ကို မေးလို့ရတယ်။ ၆။ ဗီဇာinterview မှာ ဖြေရင် ဘာလို့ ဒီကျောင်းတက်ချင်ရလဲ ဆိုတာ လှလှပပ ပြောနိုင်ရမယ်။ ကျောင်းပြီးရင် မြန်မာပြည်ပြန်မှာ သေချာတဲ့ သူကိုပဲ ပေးတာများတယ်။ သိချင်တာ ရှိရင် မေးလို့ ရတယ်
Author stevePosted on 18th December 201518th December 2015Categories UncategorisedLeaveacomment on How to join UK university	2 Letter Words Allowed in Scrabble	All2Letter Words Allowed in Scrabble
Here isalist of all the two letter words allowed in Scrabble. Along with each word, I’ve included the word’s part of speech (in italics) followed by its meaning, inflections, and variant spellings (if it has any, of course).
Since it’s always important to know which two letter words take an S, each word is also followed byalower case s if the word does take an S, oradash (–) if it doesn’t take an S.
AA s noun type of Hawaiian lava…
AB s noun short ABDOMINAL muscle
AD s noun short ADVERTISEMENT
AE – adj Scot one also YAE
AG s noun short AGRICULTURE
AH s verb express surprise or joy AHING AHED
AI s noun Tupi three-toed sloth
AL s noun E. Indian shrub also AAL
AM – infl BE verb exist
AN – adj indefinite article
AR s noun letter ‘R’
AS s noun Norse god AESIR noun gravel ridge ASAR
AT – prep denoting place or time
AW – intj expressing sympathy
AX – verb chop or cut down AXED AXES AXING also AXE
AY s noun affirmative vote also AYE
BA s noun Anc Egypt soul
BE s verb exist BES noun Hebrew letter
BI s noun short BISEXUAL
BO s noun pal or buddy
BY s noun pass to the next round also BYE
CH – prn obs dial ‘I’
DA s noun heavy Burmese knife
DE – prep from, as used in names
DI s pl DEUS noun L god also DEI DIS verb dismiss or put down
DO s noun musical note DOS verb act DOES DOING DID DIDST DONE
EA s noun dial river
ED s noun short EDUCATION
EE – noun Scot eye EEN
EF s noun letter ‘F’
EH s verb say ‘eh’ EHING EHED
EL s noun letter ‘L’
EM s noun letter ‘M’
EN s noun letter ‘N’
ER s intj expressing hesitation ERS noun bitter vetch
ES s noun letter ‘S’ ESES also ESS
ET – infl EAT verb consume food
EX – verb cross out EXING EXED EXES
FA s noun musical note also FAH
FE s noun Hebrew letter also FEH
FY – intj expressing reproach
SUBSCRIBE TO WORD BUFFGI s noun judo or karate costume
GO s noun turn verb move GOES GOING WENT GONE
GU s noun old Shetland violin also GUE GJU
HA s intj expressing surprise
HE s noun male
HI s intj calling attention
HM – intj expressing hesitation also HMM
HO s verb halt HOING HOED also HOH HOA
ID s noun self
IF s noun condition
IN s verb gather in harvest INNING INNED
IO s noun cry expressing triumph
IS – infl BE verb exist
IT s prn neuter of he, she, him, or her
JA – intj Ger yes
JO – noun Scot loved one JOES
KA s verb serve KAING KAED also KAE
KI s noun Jap spirit of martial art
KO s noun Maori digging-stick
KY – noun cattle
LA s noun musical note also LAH
LI s noun Chin unit of distance
LO s intj see or look LOS intj arch expressing praise
MA s noun coll mother
ME s noun musical note also MI
MI s noun musical note also ME
MM – intj expressing agreement
MO s noun short MOMENT
MU s noun Greek letter
MY – adj of or belonging to me
NA s intj Scot no, not at all NAS adv obs has not, or was not
NE – adj masc born with the name of
NO s noun negative response NOES
NU s noun Greek letter
NY s verb approach NYES NYING NYED also NYE NIE
OB s noun short OBJECTION
OD s noun mystical force
OE s noun Scot grandchild also OY OYE
OF – prep belonging to
OH s verb express surprise OHING OHED
OI – intj attracting attention
OM s noun intoned Hindu symbol
ON s verb go on with ONNING ONNED
OO s noun Scot wool
OP s noun short OPERATION
OR s noun heraldic colour, gold
OS – noun L bone OSSA noun mouth-like opening ORA
OU s noun SAf bloke
OW – intj expressing pain
OX – noun bovine animal OXEN noun clumsy person OXES
OY s noun Scot grandchild also OE OYE
PA s noun father
PE s noun Hebrew letter also PEH
PI s noun Greek letter verb confuse PIED PIING also PIE PYE
PO s noun short CHAMBERPOT
QI s noun Chin physical life-force
RE s noun musical note
SH – intj requesting silence also SHA SHH
SI s noun musical note
SO s noun musical note also SOH SOL
ST – intj requesting silence
TA s noun expression of thanks
TE s noun musical note also TI
TI s noun musical note also TE
TO – prep in the direction of
UG s verb dread or loathe UGGING UGGED
UH – intj expressing surprise
UM – intj expressing doubt or hesitation also UMM
UN s noun dial one
UP s verb move up UPPING UPPED
UR – intj expressing hesitation
US – prn we
UT s noun musical note
WE – prn group that includes me
WO s noun misery also WOE
XI s noun Greek letter
XU – noun money Vietnam
YA – prn you
YE s prn arch you
YO s noun call for attention
YU s noun Chin precious jade
ZA s noun short PIZZA
ZO s noun Tibetan yak also DZO ZHO DZHO DSO
Author stevePosted on 15th August 20156th January 2016Categories UncategorisedLeaveacomment on2Letter Words Allowed in Scrabble	5 words to avoid to describe yourself in interview	http://time.com/3825835/5-words-avoid-describe-yourself/
Author stevePosted on 8th August 20156th January 2016Categories UncategorisedLeaveacomment on5words to avoid to describe yourself in interview	Vocabulary for speaking	Author stevePosted on 7th August 20156th January 2016Categories UncategorisedLeaveacomment on Vocabulary for speaking	How to set up Foscam internet camera	How to set up Foscam internet camera. This is my way of Foscam set-up. Although my device is F18918W, I think all foscam cameras are similar. I noted down the step-by step setting as I did and now I just post here for my future reference as well as for my friends who need this. Sorry I am not taking responsibility if I waste your time.
The basic idea of internet camera is to transfer the video images from Foscam camera which is connected your home wifi network to your mobile device ( iphone/ Android phone) with the help of third party server.
to set up in Foscam application on PC
to obtain third party server address/username
to set up in your mobile device
Connect Foscam power
Connect camera with Ethernet cable ( I do this in order to get Foscam cam’s IP address easily )
Install Foscam application in your PC( available on its website or from CD provided with camera)
Url will appear. For example 192.168.x.xxx. Click it.
Log in (user name= admin, P/w= leave blank) You need to create own password for the security purpose
Click Device Management at the bottom of left column )
From now, you need to go through the buttons on the left column of foscam panle in order to personalize
7. Go to Alias Settings : Change your device name if you want ( from Anonymous to “Living room ” or “bath room ” for example ) and click “submit”
8. Go to Users Setting : Change user name “Admin” to your own user name or keep it as you want. But you need to enter password for security reason. ( write down or memorize it. If you forget that password in the future, you need to do the whole setting again. which is painful.)
9. Go to Basic network setting: change HTTP port number ( I choose 8090)
10. Go to Wireless LAN setting
– Your wireless network will appear. Type your wireless key in order to connect your home wifi network
11. Go to DDNS setting
You need some details for DDNS setting. For that, go www.noip.com
Register with noip.com. (Note down your noip user name and password. Your no-ip user name is DDNS user name and your no-ip password is your DDNS password. These are required in next step)
You need to create your own domain in noip.com ( http://yourname.ddns.net ). As it is free, you need to log in noip.com account onceamonth to keep active.
And then, come back to DDNS setting of Foscam.
DDNS service: Choose No-IP from drop down menu
DDNS User: enter No-IP username
DDNS Password: enter No-IP.com account password.
DDNS Host: yourname.DDNS.net
12. Port forwarding- Most important step. Without port forwarding, you cannot havearemote access, meaning you can not watch your home via internet while you are away.
Setting of port forwarding depends on the type of router. This website portforward.com is very useful for this purpose. Visit and learn how to do it.
13. Now you need to set up in your smart phone
Download Foscam app from google Play store or Apple store according to your type of phone.
Enter details in mobile app as below
Device Name: Cam1 or Living room (your choice)
DDNS URL: http://yourname.ddns.net ( as you created in no-ip website )
Media Port : 8090
User name: your Foscam user name ( Not DDNS user name )
Password: your Foscam password ( Not DDNS password )
14 . Disconnect Ethernet.
15. Log in on your mobile app
Author stevePosted on 6th January 20156th January 2016Categories UncategorisedLeaveacomment on How to set up Foscam internet camera	Search for:
Recent Posts	Good combination of Myanmar foods
How to join UK university
2 Letter Words Allowed in Scrabble
5 words to avoid to describe yourself in interview